Kunezimo eziningi lapho umthetho wesibopho udlala indima. Isibonelo, cabanga ngesimo lapho isisebenzi sithola ingozi ngaphakathi kokuqukethwe noma ngesikhathi somsebenzi. Esimweni esinjalo, kwesinye isikhathi umqashi angabekwa icala lomthetho kumqashwa ngomonakalo olimayo.
NGESIDINGO SOMLINGISI WOKULULA?
Kunezimo eziningi lapho umthetho wesibopho udlala indima. Isibonelo, cabanga ngesimo lapho isisebenzi sithola ingozi ngaphakathi kokuqukethwe noma ngesikhathi somsebenzi. Esimweni esinjalo, kwesinye isikhathi umqashi angabekwa icala lomthetho kumqashwa ngomonakalo olimayo. Kwezinye izimo, abakhiqizi bangaboshwa. Lokhu kunjalo lapho umthengi enenkinga yokulimala bese kutholakala ukuthi lo monakalo ubangelwe yisiphene kumkhiqizo. Futhi, umqondisi wenkampani kwezinye izikhathi angabanjwa ngumuntu uqobo ngokungezelela noma esikhundleni senkampani.
> Isikweletu somqashi
> Umthwalo wemikhiqizo
> Isikweletu soMqondisi
> Isikweletu esisekelwe kulona
> Isikweletu sobungcweti
Ngabe ubhekene nesikweletu noma ufuna ukubopha umuntu icala? Abameli bezikweletu kusuka Law & More uzokujabulela ukukunikeza ukwesekwa okusemthethweni.
• Isikweletu somqashi;
• Isikweletu somkhiqizo;
• Isikweletu soMqondisi;
• Isikweletu esiqinile;
• Isikweletu esisuselwe kububi;
• Isikweletu sobungcweti
Ngabe ubhekene nesimangalo somonakalo futhi ungathanda usizo lwezomthetho kwinqubo?
Uma isisebenzi sithola ingozi ngesikhathi noma sihlobene nokwenza umsebenzi waso, umqashi angaba nesibopho esingokomthetho somsebenzi kulowo monakalo owenzekile. Lokhu kungenxa yokuthi umqashi unesibopho esikhethekile sokunakekelwa lapho kwenziwa umsebenzi. Ubhekene nesibopho sokulimala okutholwe yisisebenzi ngesikhathi somsebenzi wakhe, ngaphandle kokuthi akhombise ukuthi usifezile isibopho sakhe sokunakekelwa. Uma umqashi engakhombisa ukuthi uthathe zonke izindlela ezifanele ukuvimbela ingozi, akanacala. Futhi, ezimweni lapho umqashwa enikwe ngenhloso noma ngokunganaki ngamabomu, umqashi akanakusolwa. Sibheka wonke amaqiniso nezimo futhi sizokujabulela ukukusiza uma ubhekene nesibopho sokuqasha noma uma ufuna ukubamba umqashi wakho ukuthi akhokhe ngenxa yomonakalo olimele.
Uma usuthenge umkhiqizo, ulindela ukuthi uqine. Awulindeli ukuthi ukusetshenziswa kwayo kuzokulimaza. Ngeshwa, lokhu kusengenzeka. Ungacabanga ngomonakalo odalwe umshini onephutha, ukudla neminye imikhiqizo yabathengi.
Umenzi unesibopho esingokomthetho sokulimaza lapho kufakazelwa ukuthi lo monakalo ubangelwe yisiphene kumkhiqizo. Umkhiqizo ubhekwa njengongenasici uma unganikeli ukuphepha okulindele kuwo. Uma uhlukumezekile ngenxa yomkhiqizo onephutha, sizojabula ukukunikeza usekelwa ngokomthetho.
Ngokomthetho, inkampani inesibopho sezikweletu ezifakiwe. Kodwa-ke, umqondisi wenkampani angahle abhekane nezimo ezithile ngokwengeza noma esikhundleni senkampani. Umqondisi empeleni ubophekile ukwenza imisebenzi yakhe ngendlela. Uma ubhekene nesikweletu njengomqondisi webhizinisi elisemthethweni, imiphumela ingaba nkulu. Law & More isiza abaqondisi ababhekene noma basongele ngamacala abekwe wona. Siphinde sisize amaqembu afuna ukubamba umqondisi ngokusemthethweni.
Isikweletu esisekelwe kulona
Lolu hlobo lwesikweletu lususelwa kunephutha noma budedengu. Uma uhlukumezekile ngomonakalo, sizokujabulela ukukusiza ubambe umuntu obangele lo monakalo ukuba akhokhelwe ngokomthetho. Ungaxhumana nathi futhi ukuze uthole ukwesekwa okusemthethweni uma ubhekene necala omunye umuntu lokudala ukulimala.
Lapho uchwepheshe ozisebenzelayo, onjengodokotela, umgcini wezincwadi wezezimali noma we-notary, enza iphutha lobuchwepheshe, angabekwa icala ngokusemthethweni kumakhasimende noma ezigulini. Kepha kuziphi izimo lapho ukungaziphathi kahle okunjalo kwenzeka khona? Lo ngumbuzo onzima. Impendulo incike kuwo wonke amaqiniso kanye nezimo zecala.
Uma uchwepheshe ozisebenzelayo futhi ubhekene necala lephutha lochwepheshe, sizokujabulela ukukusiza.